Lesi sikhombisi sinikeza imininingwane ngesipiliyoni kanye neziqu zothisha esikoleni. Othisha bathathwa njengabanolwazi uma beneminyaka engaphezu kwemibili befundisa. Othisha bacatshangelwa ukuthi &quot;abasensimini&quot; uma behlangabezana nazo zonke izidingo ezikhona zokuqinisekiswa kothisha endaweni yesifundo kanye neleveli yokufundisa lapho befundisa khona. (Umthombo wedatha: unyaka wesikole ka-2018-2019)
Bangaki othisha besikhathi esigcwele abakulesi sikole?
Abafundisi Besikhathi esigcwele
Bangakanani abanolwazi othisha kulesi sikole?
Othisha bathathwa njengabanolwazi uma befundisa iminyaka engaphezu kwemibili.
Abaphathi bendawo bakukhumbule kanjani ukusebenza ngempumelelo kothisha kulesi sikole?
Kudingeka ukwenziwa ngcono